Apple TV + inogona kuitwa ne 'Hapana nguva yekufa', iyo itsva James Bond bhaisikopo | IPhone nhau
Nezuro ndanga ndichitaura nezve chii inotevera Scarlett Johansson bhaisikopo iri kuuya Apple TV +, kufambiswa neApple kunatsiridza katarogu yayo uye nekudaro uwane vakawanda vashandisi. Asi kwete chete ivo vanochengeta iyo bhaisikopo ... Zvino zvese zvinoita senge zvinonongedza kune izvo kubva kuCupertino vangave vanofarira kutora kodzero dze 'Hapana nguva yekufa', iyo inotevera firimu neakagamuchirwa James Bond. Ramba uchiverenga kuti isu tinokuudza iwe zvese zvese.
Zvinofanira kutaurwa kuti tiri kutaura nezverunyerekupe, asi iwo runyerekupe runoratidza zvirongwa zvakajeka zveApple ... Tiri kutaura nezve Firimu razvino raDaniel Craig saJames Bond, iyo firimu ine chirevo chakakosha gore rino, kwete chete nekuda kwekuenda kwaCraig, asi nekutie yaitarisirwa kuburitswa pakati pegore asi denda rakanonoka kuburitswa semamwe mafirimu. 'Hapana nguva yekufa' yakakosha sezvo isu tiri kutaura nezve firimu kubva kufranchise iyo inogara iri kubudirira, uye chaizvo izvi zvayeresa chikamu chikuru chebhizimusi rekuteerera. Inoita kunge firimu, asi yazvino firimu raJames Bond iri kuuya kuApple TV + zvinoreva kuti iyo Cupertino chikuva ichanyura mukati chaimo mubhizimusi re blockbuster.
Mukupedzisira zvese zvinoshandura muchipo chakanakisa. Runyerekupe runoratidza kuti MGM, mugadziri weiyo firimu (avo vane shumba inodzvova), akapa iyi firimu kumapuratifomu akasiyana siyana Yekutenderera vhidhiyo, saka Apple TV + neNetflix zvinoita kunge vari kukwikwidza, Apple iri iyo ingangove iri padhuze nekuwana kodzero dzekuti 'Hapana nguva yekufa'. Tichaona zvinoitika nezvose izvi, inhau dzakanaka uye dzingaite kuti vazhinji vafunge kubhadhara Apple TV + (zvirinani) mumwezve mwedzi. Vazhinji vedu tiri kunakidzwa neApple chikuva mahara mushure mekutenga chishandiso chitsva uye izvi zvinogona kutikurudzira kuti tirambe tichipa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Apple TV + inogona kuitwa ne 'Hapana nguva yekufa', iyo itsva James Bond bhaisikopo
Vhidhiyo inosimbisa kuti iyo iPhone 12 uye iPhone 12 Pro inokwidza bhatiri rakafanana